> Resource > Ladnaansho > Acer Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Acer Hard Drive
Acer Data Recovery Help, Fadlan!
Hi, waxaan kaliya goob warshad soo celiyo aan Acer Aspire 5475Q. Waxaan halkan dooneyn in suroobi karaa waddo inay i bogsii faylasha iyo xogta laga Mudanayaasha asalka? Qaar ka mid ah aan dukumenti, sawiro iyo videos yihiin laga badiyay. Thanks mar kale.
Mararka qaarkood waxaad u baahan tahay in la sameeyo warshad resetting aad laptop Acer. Iyo resetting warshad waa mid ka mid ah sababaha keeni arrinta khasaaro faylka. Sidaas, waxa xalka ugu wanaagsan si ay u soo ceshano xogta lumay ka Acer drive adag? Jawaabtu waa waadaxa ah barnaamijka Acer kabashada xogta.
Waxaad qaadan kartaa eegno Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac , taas oo ah barnaamijka xog ah in aad bixisaa ah qaababka ugu awooda inuu ka soo kabsado xogta ka Acer drive adag. Wax kasta oo sababaha keeni xogta lumiya ka drive Acer adag, si fudud ayaad u hanato karaa qasabno yar oo sahlan oo isticmaalaya Wondershare Data Recovery.
Download version tijaabo ah Wondershare Data Recovery iyo bilowdo kabashada Acer HDD hadda.
Qabtaan Acer Hard Drive Recovery in 3 Talaabooyinka
Iyada oo taageero ka Wondershare Data Recovery, ayaad ugu soo ceshano karo files ku dhowaad dhammaan lumay ka drive Acer adag, oo ay ku jiraan sawirrada, videos, files music, document files, emails, iwm Hadda aynu bilaabi kabashada la version Windows.
Tallaabada 1 Select Recovery Mode inuu ka soo kabsado Xogta laga Acer Hard Drive
Ka dib markii socda barnaamijka, interface ka bilaabatay 3 hababka soo kabashada lagu soo bandhigi doonaa shaashadda. Halkan waxa aad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan "lumay Recovery File" inuu ku soo bilowdo.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha soo dajiyo barnaamij ku saabsan Acer drive adag meesha faylasha aad ayaa laga badiyay ka. Oo waxaad kaloo isku dayi kartaa oo kale qaabab kabashada haddii aad rabto. Iska akhriso edbinta si taxadar leh in la ogaado sida ay u shaqeeyaan.
Tallaabada 2 baarista Acer Hard Drive
Markaas qalabka bilaabi doonaan aad ka baareyso drive Acer adag, si aad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan warqadda drive midig oo guji "Start Scan" in la raadiyo xog lumay.
Tallaabada 3 ceshano Xogta laga Acer Hard Drive Xulo
Scan ka dib, dhammaan xogta helo waa la tusay doonaa qaybaha ee bidix ee Window barnaamijka. Fadlan guji faylasha nooc oo aad rabto in aad dib u soo ceshano, si aad u hubin karaan in files lumay laga helay ama aan.
Markaas waxaad dooran kartaa files oo guji "Ladnaansho" si ay dib ugu your computer u celinaynaa.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha badbaadiyo files soo kabsaday si drive adadagna waxay u gabbasho loo isticmaalo.